Ciidamo ka tirsan AMISOM oo maanta la geeyey magaalada Baydhabo
Baydhabo:-Ciidamo tirsan AMISOM oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 100 askari ayaa maanta waxaa la geeyey magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Bay ,ciidanka AMISOM ee maanta tegay magaalada Baydhabo ayaa waxaa ay ka kooban yihiin ciidamo ka socda dalka Ugaandha iyo Burundi.
Sarkaal ka tirsan ciidanka AMISOM Jen. Audace Nduwumunsi oo saxaafada la hadlay ayaa ku nuuxnuuxsaday in ciidanka AMISOM ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ay hordhac u yihiin ciidamo ka socod AMISOM oo la qorsheeyey in la geeyeyo magaalada Baydhabo iyo Beledweyne, Ciidanka AMISOM ayaa markii ay ka soo dageen Garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa soo dhaweeyey Saraakiil ka tirsan ciidanka Itoobiya iyo kuwa DFKM oo iyagu hadda gacanta ku haya magaalada Baydhabo.
Jen. Audace Nduwumunsi ayaa sheegay in ay maanta talaabo weyn ay horay u qaadeen oo ay ciidamo ka tiran Midowga afrika ay geeyeen magaalada Baydhabo ayna qorshaynayaan in ay gobollada kale ee dalka ay geeyaan si ay gacan u siiyaan DFKM una balaariyaan howl galka ay ciidanka AMISOM ay ka wadaan magaalada Muqdisho.
Sarkaalkaan u hadlay ciidanka AMISOM Jen. Audace Nduwumunsi ayaa ku faanay in ciidanka AMISOM iyo kuwa DFKM ay si wada jira ah u wiiqeen awoodii ciidanka ururka Al-shabaab ayna ka qabsadeen Gobollo badan oo ay gacanta ku hayeen, ilaa hadda ma cada goobta ay ciidanka AMISOM ay ka dhigan doonaa Saldhig balse waxaa jira oo dad badan ogyihiin in ciidanka Itoobiya ay yihiin kuwa iyagu qabsaday magaalada Baydhabo iyo Beledweyne iyagoo gacan siinaya ciidamo soomaali ah oo taageersan DFKM balse wata magacyo kale duwan.
Ciidanka AMISOM ayaa iyagu waxaa ay la daalaa dhacayaan weeraro iyo qaraxyo ay ku ekeeyaan ciidamo ka tirsan ururka Al-shabaab oo iyagu sheegay in ay wax ka bedeleen qaabkii ay dagaalka u wadeen si ay khasaaro xooggan ay u gaarsiiyaan ciidanka AMISOM iyo kuwa DFKM oo uu ka dhex socdo dagaal adag.